I-Sorochanu Hills, ekhuselweyo kwindawo ephithizelayo yesixeko, ibekwe ecaleni kwethambeka le-9 kunye ne-10 leSorochany Ski Complex, ebusika yindawo efanelekileyo yabatyibilizi, abahamba ngekhephu kunye nekhephu.Kwisakhiwo esinendawo yealpine, indlu epholileyo enendawo enkulu yangaphandle. Umoya omtsha, ihlathi, umlambo waseYakhroma, intwasahlobo, ukuthula kunye nokuphumla kukulungele iintsapho ezinabantwana okanye kwinkampani enobungane.Ehlotyeni, unokuhambahamba ehlathini kumakhowa, amajikijolo, ukuloba, iibhaluni, i-hang-gliding.
Le chalet enelanga eneefestile zepanoramic ibekwe kwindawo ebiyelweyo kunye nendawo yokupaka iimoto ezi-2 kwaye ixhotyiswe ngenkqubo yokucoca amanzi kunye nenkqubo yokuzimela eco-sewage. Le ndlu inamagumbi amathathu okulala abodwa (igumbi eli-1: ibhedi ephindwe kabini, eyi-2 igumbi: ibhedi enye, iguqulelwa kwigumbi lokulala eli-2, igumbi eli-3: iibhedi ezi-2 kunye nebhedi yeendwendwe zethu ezincinci) kunye nekhitshi-igumbi lokuhlala elinentofontofo. Isofa kunye nemiqamelo epholileyo yokuphumla. Ubume be-chalet - amagumbi okulala ahlukeneyo anika iindwendwe ithuba lokuba ngasese kunye nokuphumla. Indawo yokuhlala ekhululekile: izibini ezi-2, usana + umntwana okanye umntu omdala ebhedini enye, okanye abantu abadala aba-2 kunye nabantwana aba-4 + usana. Iindwendwe eziphezulu: izibini ezi-3 kunye nosana. Ukulala kwi-sofa ekhitshini-igumbi lokuhlala akuvumelekanga. Ngesicelo, sibonelela: isitulo esiphezulu, ibhafu, indawo yokudlala yomntwana, itafile yokutshintsha, i-radio nanny yeendwendwe ezincinci kunye nefeni.
Wp, sms, ifowuni, email.